४१ जिल्लामा ‘लकडाउन’ : नौ जिल्ला रेडजोनमा, पाँच जिल्लामा शून्य संक्रमित - ParyatanBazar.com
भदौ १, काठमाण्डौ। लकडाउन खुलेसँगै कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि अधिकांश जिल्ला फेरि लकडाउनतर्फ नै फर्किएका छन् । कतै निषेधाज्ञामार्फत सिडिओले त कतै स्थानीय तहले निर्णय गरेर अत्यावश्यकबाहेकका व्यवसायमा रोक लगाएका छन् । त्यसको स्वरूप भने लकडाउनकै जस्तो छ ।
संक्रमित – १,५६७ (१९६७)
वृद्धवृद्धा – २२२ (१४ प्रतिशत)
संक्रमित – २६८
वृद्धवृद्धा – ४८ (१७ प्रतिशत)
संक्रमित – १३२
वृद्धवृद्धा – १० (सात प्रतिशत)
संक्रमित – १,३८४
वृद्धवृद्धा – २४० (१७ प्रतिशत)
संक्रमित – ९९९
वृद्धवृद्धा – १४३ (१४ प्रतिशत)
नेपालमा कोरोना पुष्टि भएको दिन ९ माघदेखि नै सरकारले ५० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धासम्म संक्रमण पुग्न रोक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामै कोरोना देखिएकामध्ये १४ प्रतिशत वृद्धवृद्धा रहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म काठमाडौं उपत्यकमा एक हजार नौ सय ६७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये दुई सय ८० अर्थात् १४ प्रतिशत वृद्धवृद्धा रहेका छन् । देशका अन्य जिल्लाको तुलनामा यो धेरै हो । पछिल्लो एक महिनामा ठूलो संख्यामा उपत्यकामा वृद्धवृद्धा संक्रमित हुनुले घरघरमा कोरोना पुगेको चिकित्सकहरूको अनुमान छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतको महामारी नियन्त्रण गर्ने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे उपत्यकाका वृद्धवृद्धामा संक्रमण बढी देखिनु अध्ययनको विषय भएको बताउँछन् । ‘विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका कारण उनीहरू अस्पताल पुगेका छन्,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘वृद्धवृद्धालाई त्यहीँबाट संक्रमण भएको हुनुपर्छ ।’
तर, कोरोनाका कारण अस्पतालहरूले बिरामी लिने गरेका छैनन् । वृद्धवृद्धा त झन् अस्पताल जाने गरेका छैनन् । देशभर पनि २६ हजार ६ सय ६० संक्रमितमध्ये दुई हजार एक सय ६९ जना अर्थात् आठ प्रतिशत वृद्धवृद्धा छन् । देशभर एक सय चारजनाको र उपत्यकामा नौजनाको मृत्यु भएको छ । उपत्यकामा मृत्यु भएका अधिकांश ५० वर्षभन्दा माथिका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार तराई–मधेसका पर्सा, महोत्तरीमा पनि वृद्धवृद्धामा संक्रमण केही बढी देखिएको छ । ती जिल्लामा लामो समयदेखि संक्रमण देखिएकाले चिकित्सकहरूले त्यसलाई ठूलो विषय मानेका छैनन् । तर, उपत्यकामा एक महिनायता बढेको संक्रमण सात प्रतिशत वृद्धवृद्धामा फैलिनुलाई स्वास्थ्य संकटका रूपमा चिकित्सकले हेरेका छन् ।
सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका सरुवारोगविज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार वृद्धवृद्धामा कोरोना संक्रमण बढ्नुले ढोकाढोकामा संक्रमण पुगिसकेको संकेत गर्छ । उपत्यकामा लकडाउन अन्त्य भएपछि बढी संक्रमण फैलिएको उनी बताउँछन् । ‘वृद्धवृद्धाको चहलपहल घरभन्दा बाहिर हुँदैन । यस्तो वेला उनीहरूमा कोरोना बढी देखिनु भनेको गम्भीर विषय हो । काठमाडौंको जनसंख्या बढी भएकाले पनि कुनै न कुनै कारणले केस फैलिएको छ,’ डा. पुनले भने, ‘वृद्धवृद्धामा बढी देखिनु भनेको क्रमशः समुदायमा संक्रमण फैलिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ ।’
त्यस्तै, कोरोनाबाट दुईजनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या एक सय चार पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । मृत्यु हुनेहरू पर्साका एक पुरुष र मोरङकी एक महिला छन् ।